Ry fotoana ô, ahantony ny fisidinanao!
"Ao ny andro ahaterahana, ary ao ny andro ahafatesana." Mpitoriteny 3:2
"(Hoy Jesosy:) Satria velona Aho dia ho velona koa ianareo." Jaona 14:19
Ambaran’ilay poeta antsoina hoe Lamartine, amin’io andalan-tononkalo io, izay mety ho nonofinofisintsika tamina fotoana tena nahasambatra antsika, dia ny fijanonan’ny fotoana.
Mifamatotra amin’ny fotoana ny fiainantsika. Na mandritra ny torimasontsika aza dia tsy mitsahatra ny misosa ny fotoana: voagadrany isika. Ny olombelona, izay voarin’Andriamanitra, dia iharan’izany fanerena izany eto an-tany. Ilay Mpahary ny lanitra sy ny tany kosa, Jehovah, dia sady tsy manam-piandohana no tsy manam-piafarana.
Ny olombelona dia teraka sy miaina eto an-tany; ary raha ny fahafatesan’ny vatantsika no fiafaran’ny fiainantsika eto an-tany, ny Baiboly kosa milaza amintsika fa tsy izany tsy akory no fiafaran’ny fisiantsika. Isika ve mba afaka maminavina am-pahatoniana io fiampitana io, avy amin’ny fiainana eto an-tany, ho any ankoatra? Ny fahafatesana no idiran’ny kristiana eo amin’i Jesosy, ary eo no iandrasany ny fitsanganana ho fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy tamin’ilay jiolahy ho faty: “Anio no hihaonanao amiko any Paradisa” (Lioka 23:43). Rehefa hikimpy ny masonao, ianao koa ve mba hiaraka amin’i Jesosy, Izy Izay nilaza hoe: “Izaho no fananganana ny maty sy fiainana” (Jaona 11:25)? Izay segondra mandalo dia tsy maintsy mampanakaiky antsika amin’ny fiafaran’ny fiainantsika eto an-tany. Raha nino ny Tompo Jesosy ianao, dia manana fanantenana, satria “raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran’Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin’i Jesosy hiaraka aminy” (1 Tesaloniana 4:14). Ny miaraka amin’i Jesosy, ankehitriny sy mandrakizay: izany no fahasambarantsika!